तिमीलाई बुझ्ने भएकी छु आमा ! - नागरिक रैबार
फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्, ‘तिमी मलाई एउटी असल आमा देऊ, म तिमीलाई असल राष्ट्र दिन्छु ।’
आमा, आहा कति मिठो लाग्ने शब्द ! कति प्रिय लाग्ने शब्द ! संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन आमा, सबैभन्दा पहिले बोल्न सिकेको शव्द आमा, अप्ठेरोमा आफैं बोलिने शब्द आमा । आमा ती साक्षात देवी हुन्, जसका बारेमा जतिसुकै र जस्तासुकै शब्दले गुणगान गाए पनि त्यो अधुरै हुन्छ । आमा ममताकी खानी, स्नेहकी सागर र वात्सल्यकी आकाश हुन् । सन्तानका लागि आमा धर्ती हुन् । माया र प्रेरणाकी प्रतिमूर्ति हुन् । आमा सन्तानको ढुकढुकी हुन् । आशा र भरोसा हुन् । आमा भनेकी आस्था हुन् । आदर्श हुन् ।
विडम्बना ! आमा आज तिमी एउटा पिँजडाभित्र कैद गरिएकी मैना झैं भएकी छौ । खुला हावामा सास फेरेकी तिमी आज सुनसान कोठामा एक्लै झाक्राएकी छौ । सन्तानको सहारा खोजेकी छौ । धडकन बढाएकी छौ । हरेक मुश्किलमा मलाई तरीदिने तिमीले आज मबाट त्यही आशा गरेकी छौ । लोलाएकी छौ, टोलाएकी छौ । समयले कस्तो जटिल मोडमा ल्याइदियो मलाई जीवन दिने आमा तिमी बिरामी हुँदा म तिम्रो नजिक आउन सकेकी छैन ।
विपतको यो समयलाई ख्याल गरी आफू सुरक्षित हुनु र तिम्रो सुरक्षाको ध्यान दिनु नै तिम्रा लागि अनमोल उपहार हुनेछ यो पालि । तिमी कति निर्दोष छौ आमा ! कति धैर्य भएर विपतमा पनि तिमी मुस्कुराएकी छौ । पीडा लुकाएकी छौ । मैले बुझेकी छु तिम्रो महानता । तिम्रोे लगनशीलता अनि तिमीले उच्चारण गर्न सिकाएका हरेक शब्द–शब्द सम्झेकी छु आज ।
यस्ती महान आमाको मुख हेर्ने दिन आज तिमीसमक्ष आउन नपाए पनि कैयौं बर्ष यो शव्द उच्चारण गर्न पाइरहुँ । तिम्रो साथ र माया यसरी नै पाइरहुँ । आज टाढैबाट आर्शिवाद देउ आमा । जब तिम्रो आशिर्वादले काम गर्छ नि, तब बाटोको तगारोले पनि मलाई सलाम गर्छ । सम्पूर्ण आमाहरुमा नमन ।
धनगढीमा ग्यास उद्योगको मेसिन बिग्रिएपछि अक्सिजनको थप हाहाकार